Dowlada Kenya oo diiwaanka Qaxootiga ka saareysa Soomaali ku nool xeryaha Dadab | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Dowlada Kenya oo diiwaanka Qaxootiga ka saareysa Soomaali ku nool xeryaha Dadab
Dowlada Kenya oo diiwaanka Qaxootiga ka saareysa Soomaali ku nool xeryaha Dadab
Munaasabad balaaran oo daaha looga jaray ololaha diiwaanka qaxootiga looga saarayo Bulshada Kenyaanka ah ee ku dhaqan deegaanada marti galiyay qaxootiga Dadaab ee gobolka waqooyi bari ayaa ka dhacday barxada weyn ee dugsiga hoose ee dhexe ee Garissa.
Madasha ayaa waxaa goob joog ka ahaa xoghayaha wasaarada arimaha gudaha Kenya Patrick Ole Ntutu, barasaabka ismaamulka Garissa Cali Bunow Qorane mudanaha golaha aqalka sare u matalada Garissa Maxamed Yuusuf Xaaji Xildhibaanada deegaanada marti galiyay qaxootiga iyo mas,uuliyiin ka socda hey,ada qaxootiga UNHCR.
Xildhibaanada oo ka wadahadlay goobta ayaa aad u soo dhaweeyay waxaana ay ugu baaqeen shacabka in ay ka faa,ideestaan fursadaan maadaama inbadaban ay Wadasugayeen.
Mudanayaasha goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaanka degmada Dadab Maxamed Daahiye Ducaale dhiggiisa Faafi Cabdikariim Cismaan Rati iyo mudanaha degmada Koonfureed ee Wajeer Maxamed Omaar.
Waxay si wadajir ah uga codsadeen shacabka aysan ka saarin faraha dad aan u dhalan wadanka ee ku jira diiwaan hey,ada UNHCR.
Xeryaha qaxootiga Dadaab oo markii hore marti galisay boqolaal kun oo soomaali ah oo colaada dalka ka barakacay ayaa hadane waxaa ku milmay boqolaal kun oo soomaalida gobolka waqooyi bari kadib markii abaaro iyo saameyn kale oo dhanka nolosha ah ay isu Biirsatay.
Balse dadkaan ayaa hada waxay la dhibtoonayaan in aysan heli karin sharciyada Kenya oo muhiim u ah isku socodka gobolada iyo dhanka Waxbarashada.